မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိမ်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်(၁) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိမ်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်(၁)
မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိမ်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်(၁)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 30, 2014 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 182 Views
IMNA-အခုလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အခြေခံဥပဒေပြင်ရေးကို ဦးတည်ပြီး ၆ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ် အဘ။ဒီအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦး အနေနဲ့ သုံးသပ်ပေးပါဦး?
MNP ဥက္ကဌနိုင်ငွေသိမ်းနှင့် ဒုဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိန်း(MNP)
နိုင်ငွေသိမ်း– ပြောနေတာ အမျိူးမျိူးပေါ့ဗျာ၊ တပ်မတော်က တစ်မျိူး သမ္မတက တစ်မျိူး လွှတ်တော်က တစ်မျိူး အခုအစိုးရကလည်း အမျိူးမျိူးလုပ်နေတယ်၊ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကလည်း တစ်မျိူးကြိုးစားတယ်ပေါ့၊
သမ္မတ ကလည်း အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ အားလုံးကိုခေါ်ပြီး နေပြည်တော်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်၊ အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ အခါ သူခေါ်တုန်းက ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စလို့ပြောပြီး ပြီးတော့ ဘာကို ပြောလဲ ဆိုတော့ ၄၃၆ ကို လွှတ်တော်မှာပြင်ဖို့ တပ်မတော်က သဘောတူတယ်၊ ဒီအတိုင်းဘဲ လုပ်ကြပါလို့ပြောတယ်၊ ဆိုတော့ ၄၃၆ ကို တပ်မတော်မှာ ပြင်ဖို့ဆိုတာက တော်တော်ခဲရင်းပါတယ်၊ ၄၃၆(က) ပာ လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် မဲခွဲရင် ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းနိုင်မှ လွှတ်တော်က အတည်ပြုတယ်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံက လွှတ်တော်ထဲရောက်ပြီးရင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက တပ်မတော်က ယူထားတယ်၊ ဒါကြောင့် စစ်တပ်က သဘောတူဖို့လိုတယ်။ တပ်က သဘောမတူရင် ဖွဲစည်းပုံပြင်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ အဲဒါရမှ ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မယ်၊ အဲဒီဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲပေးနိုင်သူ ထက်ဝက်ကျော်မဲပေးနိုင်မှ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲအောင်မြင်မယ်၊ သိပ်လွယ်တဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ပြင်ဖို့ ခက်တယ်ပေါ့၊
ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မပြင်နိုင်မချင်းက တော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေစီက ဘယ်တော့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပြည်သူလက်ထဲကို အာဏာ ဘယ်တော့ မှ မရောက်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူတိုလုပ်ပေးတော့ ရမှာပါ တော်တော် ရက်ရောလာပါပြီ၊ လွှတ်တော်က ပွင့်လင်းတယ်လို့ ကိုကို ကြီးတို့က ပြောလာတယ်။ လွှတ်တော်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ၄၃၆ မှာပါတဲ့ သူတို့ ပုဒ်မ တွေကိုသွားမထိနဲ့၊ စီပွားရေး၊ပညာရေး၊ အလုပ်သမားအရေး ဘာညာ ပေါ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတယ်၊ ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ် သူတို့လက်ခံတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၄၃၆ ကို သွားမထိနဲ့ သူတို့ လက်မခံဘူး၊ သွားမထိအောင်အတွက် ဘယ်လိုက စားလဲ ဆိုတော့ လွှတ်တော်မှာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့တယ်ပေါ့၊ အဲဒီကော်မတီက သူတို့ဟာ သူတို့ သက်သက်လုပ်တယ်၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်က ပြောတာပေါ့၊ သူတိုကို့ပေးတဲ့ အာဏာက နည်းသေးတယ်၊ နောက်ထပ် တိုးပေးပါ၊ အရေးပေါ်ပေါ့၊ ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကို သူတို့ လုပ်နိုင်အောင်လို့ ပိုပြီးတော့ တောင်းတယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိနေတဲ့ တပ်မတော်က အာဏာကို ပိုလိုချင်သေးတယ်၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ မြင်တာပြောတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက သူရဦးရွှေမန်းပြောတယ် ၂၀၁၅ ကျရင် ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မယ်။ဘာလုပ်မှာလည်းဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပါဘူး၊ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ မှာပါတဲ့ပုဒ်မတွေကို ပြင်တာကိုလုပ်မလား သို့တည်းမဟုတ် ဘာလုပ်မလည်းဆိုတာ မရှင်းလင်းဘူး၊ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတာက ကျွန်တော် အမှန်အတိုင်းပြောလို့ရှိရင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်တယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအောင်မြင်ဖို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကလည်း ဒီအစိုးအရကို ဘယ်လို အကြပ်ကိုင်လို့ရမှာလဲ၊ အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့ အခြေအနေမကောင်းမှ သူတို့က လက်လွှတ်မှာ၊ အခြေအနေကောင်းရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ပြင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ သဘောပေါက်လား၊ ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာက အနုနည်းနဲ့လုပ်မယ်၊ နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်တဲ့ပုံစံတွေ အများကြီးရှိတာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ နည်းပေးတာက အန်တုဖို့ လူထုအကုန်လုံး စည်းလုံးဖို့ လယ်သမားကော အလုပ်သမားကော လူလတ်တန်းစားအကုန်လုံးပေါ့၊ တတ်နိုင်ရင် တပ်မတော်သားတွေ ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံးပြီးတော့ လုပ်ရင်တော့ သူအကြပ်ကိုင်တဲ့ နည်းဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စုစည်းညီညာပြီး မလုပ်နိုင်ရင်တော့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှာ မဟုတ်သေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးအံတုမှုကို စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အဲလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ တော်တော် ကြိုးစားလုပ်ဖို့လိုတယ်။
၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာဟာ ၆ယောက်လုံးက မတူဘူးလေ။ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ ပြောနေတာ ကြားမှာပေါ့၊ ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ လုပ်ရခက်တယ်၊ ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မှာလဲတဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တဲအတွက် ဘယ်လောက် ဘယ်လောက် အစိုးရကလုပ်လုပ်၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးတော့ တစ်ပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ရမယ်၊ သတိထားလုပ်ဖို့ လိုတယ် လုပ်ရင်လုပ်ရင်းနဲ့ ရက်ရှည်လာရင် ကိုယ်က တရားခံပြန်ဖြစ်မယ်၊ အခုက လုပ်နေတာက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်သူဖျက်သလဲ၊ သူတို့ လိုချင်တာ တိုင်းရင်းသားက ဖျက်တယ်၊ အဲဒီလို သွားမယ့် လမ်းကြောင်းကို သူတို့(တပ်မတော်)က ထွင်နေတယ်၊ သတိထားဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောတာပါ။
IMNA-ဒီထိပ်သီးခေါင်းဆောင် ၆ ဦးတွေ့မယ့်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က လွှတ်တော်ထဲက တစ်ယောက်ဘဲပါတယ်၊ အဲဒါကို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့ တိုင်းရင်သားတွေဘက်က လက်ခံနိုင်မယ်လို့ ယူဆ ပါသလား?
ဦးနိုင်ငွေသိမ်း-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒီအစိုးရ လက်ထက်မှာ ၄ ပွင့်ဆိုင်တောင်းတာပေါ့၊ တွေဆုံဆွေးနွေးပွဲတောင်းတယ်ဆိုတာက အစိုးရအဆက်ဆက်မှာ တော်တော်လေး များနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် UNA ဖွဲ့တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် အစိုးရကို တောင်းခဲ့ ပြီးပြီ။လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦး လွှတ်ပေးရေး၊ NLD နဲ့တွေဆုံပြီး အမျိူးသားရင်ကြားစေ့ ဆွေးနွေးရေးကို တောင်းဆိုပြီးပြီ၊ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ ဆက်တိုက်တောင်းခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုင်တဲ့မူက တစ်ခုတည်းဘဲ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့တန်းတူရေးဘဲ၊ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်က ဒီမိုကရေစီရှိရမယ်၊ တန်းတူရေးရှိရမယ်၊ ဒါဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လုပ်တယ်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထဲမှာ ဂန္ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး သိအောင်လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် ဗိုလ်မှုအောင်က ဦးဆောင်ပြီး ၂၃ ကော်မတီက လက်မှတ်ထိုးပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို အမျိူးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းတယ်၊ ဒါလည်း မအောင်မြင်ဘူး၊ အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဆက်လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးတယ်၊ အဲလိုဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို တစ်ခါမှ လက်မခံခဲ့ဘူးဗျ။
၉၂ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို နဝတဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော်အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်တွေကို ထောင်ချတယ်။ ၉၇ ခုနှစ်မှာ UNA ဆိုပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ကို ကျနော်တို့ ပြန်ထောင်တယ်။ကုလသမဂ္ဂကို စာရေးပို့တယ်။
၂၀ဝ၈ ဖွဲစည်းပုံက သူတို့ ကြိုက်သလို ဆွဲထားတယ်။ ဆန္ဒခံယူပွဲက မဲလိမ် ပြီးတော့ အတည်ပြုထားတာ၊ ကျွန်တော်တို့က ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်မခံနိုင်ဘူး၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း လက်မခံဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးရမယ်၊ အဲဒီတုန်းက ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးတို့ လွှတ်ပေးခဲ့တယ်၊ အဲ့တုန်းကလည်း ၃ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပါ၊ အစိုးရရယ်၊ တိုင်းရင်းသားရယ်၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုရယ်လုပ်ဖို့ ဘန်ကီမွန်းစီ စာရေး တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ ဘန်ကီမွန်းကလည်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ဒါကိုတင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဖြေထွက်မလာဘူး၊ အဲလိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်တွေအများကြီး တောင်းလာတာက ဘာလို့မအောင်မြင်လဲဆိုတော့ သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ချောင်ပိတ်ပြီး မလုပ်နိုင်လို့ပေါ့၊ သဘောပေါက်လား၊ ချောင်ပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့ဂရုစိုက်မှာ၊ အဲလိုလုပ်နိုင်မှလည်း စစ်အာဏာရှင်တွေက အရှုံးပေးမှာ၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဇွဲရှိရှိနဲ့အားလုံးစည်းလုံး ညီညွတ်ပြီး သွားနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
IMNA– ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်၊ ဒေါက်တာအေးမောင် တစ်ယောက်ထဲက တိုင်းရင်သားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ်လို့ ဘဘ အနေနဲ့လက်ခံပါလား?
နိုင်ငွေသိမ်း-သူရရွှေမန်းက လွှတ်တော်မှာပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ရွေးချယ်ခိုင်းတာပေါ့၊ လျို့ဝှက်မဲ စနစ်နဲ့ရွေးချယ်တာ ဒေါက်တာအေးမောင်ရတယ်လို့ ပြောတာပေါ့၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ သူတို့သဘောနဲ့ လွှတ်တော်ထဲရောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားကိုရွေးတယ်၊ ဒါက တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပယ်က ရှင်းနေတာဘဲ၊ နောက်တစ်ခုရှိတာက အခက်အခဲက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးနေတယ် မပြီးသေးဘူး၊ သူတို့ ပုံစံက စီပွားရေးဖွင့်ပေးပြီး တိုင်းပြည်မှာ စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး ထိန်းချင်တယ်၊ သဘောကိုကျွန်တော်ပြောတာ၊ ဦးသိန်းစိန်တို့ ဘာတို့ အကုန်လုံးက နိုင်ငံခြားသွားတယ်၊ စီးပွားရေးတွေ ဖိတ်ခေါ်တယ်၊ လာဖို့လည်း များတယ်၊ သို့သော် တစ်ခုကျန်တာက ငြိမ်းချမ်းရေးမရရင် ဒီပာက ထင်သလောက်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးသူတို့မြင်တယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်ဖိုကြိုးစားနေတာ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကြိုးစားသလဲတော့ မသိဘူး။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာ ဘာပါတီမှ မှတ်ပုံမတင်ရဘူး၊ ဆန္ဒပြရင်လည်း အမိန့်ခံစရာမလိုဘူး၊ ကိုယ်ကြိုက်သလို ပြလို့ရတယ်၊ စာနယ်ဇင်းက လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်လို့ရတယ်၊ အာဏာပိုင်တွေမကြိုက်ရင် သတိပေးတယ်၊ လက်မှတ်ထိုးရင်ပြီးတယ်၊ အရေးမယူတာမဟုတ်ဘူး အရေးယူမယ်ဆိုရင် ဥပဒေပေါ်မှီပြီး တရားစွဲရင်စွဲတယ်၊အခုဟာက စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတော့ အားလုံးပျက်သွားပြီး၊ အရပ်သားအစိုးရသစ် တက်လာပြီးဆိုတော့ စာနယ်ဇင်းကို အစလွှတ်ထားတယ်ပေါ့၊ အခုတော့ ကြပ်လာပြီ၊ ဒီတော့ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ၂၀ဝ၈ ဖွဲစည်းပုံဖြစ်လာတော့ ပြည်သူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ နေရမှာ ချောချောမွေ့မွေ့ ဆက်ဆံဖို့ သူတို့ ကြိုးစားလာတယ်၊ သို့သော်လည်း ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ အခက်အခဲ နည်းနည်းဖြစ်လာရင် ဘီလူးစိတ်ပြန်ဝင်လာရင်တော့ မသိဘူးပေါ့၊ စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။
IMNA-ဟုတ်ကဲ့ပါ အဘ။လွှတ်တော် အပြင်မှာလည်း အဘတို့လို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီး ရှိတယ်၊ ပြီးတော့ အခု လက်ရှိ မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တွေ လည်း ရှိပါတယ်၊ ဒီနှစ်ခု ကို ထားခဲ့ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲက တစ်ယောက်ဘဲ ရွေးတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာက?
နိုင်ငွေသိမ်း– ဒါကို လူတိုင်းကမေးနေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဦးရဲထွဋ်က ဒါဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မပာုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်၊ သူတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပြည်သူရဲ့ခံယူချက်တွေက တူမှမတူတာ။ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆိုတာက ဒါ For show ပေါ့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာ ပြသတာဘဲ၊ ဒါပါဘဲ ဘာမှတော့ မဖြစ်ဘူး။
(နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် IMNA သတင်းထောက် စောဇင်ညီက မွန်အမျိုးသားပါတီMNP ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိမ်းအား သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်-အယ်ဒီတာ)
ကျန်ရှိနေသည့်အပိုင်းကို နောက်တစ်ပတ်တွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။
Previous လာမည့်ဒီဇင်ဘာတွင် အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးသပ်နိုင်မည်ဟု MPC မျှော်လင့်
Next ၆ ပွင့်ဆိုင်က ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ရှိရဲ့လား